EasySign - sonia elektronika finday - haingana sy azo antoka kokoa
Anjaranao ny mametraka azy haingana sy ho voaaro
Tsotra, mety sy ekonomika
sonia elektronika finday
Ao amin'ny tontolon'ny varotra
Hanova ny findainao ho toy ny fitaovana maoderina ny EasySign, isaorana izay hahafahanao misoratra anarana haingana sy mora ny fisoratana anarana ete toy ny hoe efa nanao sonia azy ireo ianao. Ity no serivisy voalohany amin'ity karazana ity atolotra amin'ny tsena poloney
Miasa amin'ny Smartphone / Tablet / PC
Miasa tsy misy karatra ara-batana
Miasa amin'ny sehatra maro Windows / macOS / Android / iOS
Taratasy fanamarihana finday
Mifanaraka amin'ny sonia eP mahazatra
Fanamafisana ny mpanjifa matanjaka
Ny fahaizana mampifangaro amin'ny fampiasana ny API
nekena ho azy ny rindrambaiko Adobe manerana izao tontolo izao!
FIVORIANA SY famonjena
Vonona hiara-miasa amin'ny rafitra birao sy ny fitantanana
Fanohanana ireo rindranasa tsena: (e.g. fandaharana Payer / e-Declarations)
amin'ny alàlan'ny Adobe
NITOKAFANA ATAO / IANAO IANAO
Ho an'ny fitaovana rehetra raha tsy misy mpamaky sy karatra
Ny sonia tokana ary miafina
tsy avotra soa aman-tsara mihitsy izy
Hanova ny findainao ho tsotra amin'ny fitaovana maoderina i SmartSign. Vaovao - sonia mahay miasa izay tsy misy karatra ara-batana sy mpamaky, na amin'ny finday na amin'ny solosaina mahazatra.
Miasa mifanaraka amin'ny serivisy lehibe
Ny mari-pankasitrahana tsotra amin'ny SimpleSign dia azo ampiasain'ny mpandoa fandraisana anjara ZUS hanasonia fanambarana, handefasana e-Fanambarana na JPK alefa any amin'ny ZUS, rehefa mamarana ny fifanarahana momba ny lalàna sivily, hanao sonia ireo invoice elektronika.
Ny mety hampidirana ny fampiasana API
Fampidirana mampiasa API, isaorana ahafahanao mampifandray ny rafitra IT anao manokana amin'ny sehatry ny sonia antontan-taratasy miaraka amin'ny sonia elektronika mahafeno fepetra - sonia amin'ny tsindry iray. (API- Fifandraisana amin'ny Programming Interface mamela ny rindranasa mifampiresaka.)
Fanamafisana matanjaka 2
Ny fanamarinana 2 -ny dia midika hoe fampiasana ny tenimiafinao izay fantatrao ary ny singa faharoa amin'ny zavatra tsy maintsy fidiranao. Ny mpampiasa dia miditra amin'ny alàlan'ny fidirana ny tenimiafina, narahin'ny tarehimarika isa voafetra ho an'ny andro sy fotoana iray voafaritra. Miditra ny mpanjifa rehefa milalao ny tenimiafina sy ny tady.
Sokafy ny tahirin-kevitra
Ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny Internet dia mora vidy, mora sy mahamonjy ny fotoanao.Tsy misy intsony ny fanaovana pirinty, ny famenoana boky ary ny fisoratana anarana. Ny fampitana ireo antontan-taratasy dia alefa am-pahatokiana ary mandray fanamafisana ofisialy ny fandraisana ianao.
Saino ny antontan-taratasy
Ny fampiasana e-serivisy dia voaporofo hanatsarana ny asan'ny orinasa iray. Ny lisitr'ireo hetsika sy asa izay afaka mifampiraharaha amin'ny Internet dia tsy mitsaha-mitombo. Ny fanisiana tombo-kase, ny valopy, ny fandefasana ary ny vidiny dia hohadino.E-sonia mamela anao hamita ny orin'asa manan-danja nefa tsy hivoaka ao an-trano
Alefaso ny antontan-taratasy
Ny fampitana ireo antontan-taratasy dia alefa am-pahatokiana ary mandray fanamafisana ofisialy ny fandraisana ianao. antontan-taratasy misy sonia e-manana fahefana ara-dalàna toa ny hoe tanana tanana izy ireo. 128-256 bit data encryption dia miaro anao sy ny mpanjifanao amin'ny elanelan'ny angona.
Dingana valo amin'ny fahombiazana
Ny fanisiana tombo-kase, ny valopy, ny fandefasana ary ny vidiny dia hohadino
Ny Internet dia manakaiky ny mpifaninana akaiky kokoa, ary ny sonia e dia ahafahanao mamita ireo tetik'asa lehibe nefa tsy miala amin'ny biraonao.
Ampiasao sonia elektronika mba handaminana ilay raharaha manontolo ao anatin'ny minitra vitsivitsy fotsiny!
Izy io dia amidy ny fotoana. Tsy misy firy ny fanaovana pirinty, famenoana ary fanoratana ny antontan-taratasy.
Ny antoka tsara indrindra amin'ny fanamarinana natolotra rehetra dia azo antoka.
Manamafy ny fahatokisan-tena feno. Ny serivisy omena dia mifanaraka amin'ny fenitra eran-tany.
Ny fanamarinana dia hiantoka ny fiarovana ny fananana sy ny sarin'ny orinasa misy anao. Izany dia mamela ny fahatokisan-tena avo
Ny fampitana ireo antontan-taratasy dia alefa am-pahatokiana ary mandray fanamafisana ofisialy ny fandraisana ianao.
Ny taratasy fanamarinana mahafeno ny fepetra ao amin'ny serivisy SimlySign (manan-kery: 1 na 2 taona) dia miasa mifanaraka amin'ny serivisy rehetra amin'ny tsena, ka azo ampiasaina izy io:
avy amin'ny mpandray anjara amin'ny fanomezana ZUS hanasonia ny fanambarana
noho ny fandefasana e-Fanambarana na JPK dia alefa any amin'ny biraon'ny hetra
amin'ny faran'ny famaranana lavitra ny fifanarahana lalàna sivily
hanao sonia ireo fangatahana elektronika
mandefa taratasy any amin'ny Tranom-pifaliana Nasionaly (Chambre d'Études)
mametraka fitalahoana amin'ny raharaham-pitsarana fampahatsiahivana
fandefasana fangatahana ary ahazoana alalana amin'ny lisitr'ireo Fitsarana nasionaly
fifandraisana amin'ny GIODO (Inspektera générale ho an'ny fiarovana ny data manokana)
fandefasana e-fanambarana amin'ny UFG (Vatsy miantoka ny fiantohana)
fifanarahana amin'ny biraom-panjakana mitantana
mamarana ny fifanarahana amin'ny lalàna sivily amin'ny endrika elektronika
fandraisana anjara amin'ny lavanty elektronika sy tendro
serasera ao anatin'ilay sehatra ePUAP (Platform Electronic Electronic Services Services)
Ity no serivisy voalohany amin'ity karazana ity atolotra amin'ny tsena poloney, izay:
Miasa tsy misy karatra ara-batana sy mpamaky,
Mamela ny sonia e-Documents amin'ny Internet 24/7 amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao,
Miasa amin'ny fitaovana finday (Android sy iOS) ary solosaina mahazatra (PC, Mac OS),
Miantoka ny fiarovana ny fandidiana an-tserasera (fanarahana ny eIDAS, fanamarinana 2-toerana)
Taratasy fanamarinana an-tserasera
Mampiasa cookies ao amin'ny tranokalanay izahay mba hanome anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovanao ny tianao sy ny famerenana mitsidika. Amin'ny alàlan'ny tsindrio "Ekeo" dia manaiky ny fampiasana cookies cookies REHETRA ianao.
Famintinana momba ny tsiambaratelo
Ny adiresy tranokalanay dia: https://mobilesignature.eu.
Mba hanohizanao ny fanomezana anao amin'ny alàlan'ny tranokala https://mobilesignature.eu/ izahay dia te hampahafantatra anao ny momba ny fanodinana angon-drakitra sy ny fepetra ho tanterahina aorian'ny 25 Mey 2018.
Angon-drakitra angonina mandritra ny fampiasana ny tranokalanay https://mobilesignature.eu/ , tafiditra ao anatin'ireo mofomamy.
Ireo lahatsoratra eto amin'ity tranonkala ity dia mety misy ny votoaty mifangaro (oh. Horonan-tsary, sary, lahatsoratra, sns). Ny votoaty nasiana tranokala avy amin'ny tranokala hafa dia mitondra tena toy ny hoe nitsidika mivantana tranonkala manokana ny mpampiasa.
Hita ao amin'ny tranokala hafa
Ny tranokala dia afaka manangona fampahalalana momba anao, mampiasa mofomamy, mametaka rafitra fanandramana ivelany ivelany ary hanara-maso ireo fifandraisanao amin'ireo fitaovana napetraka, ao anatin'izany ny fijerena ireo fifandraisanao amin'ny fitaovana napetraka raha manana kaonty ianao ary miditra ao amin'io tranonkala io.
Ny mpandrindra ny data-nao dia IBS Poland Sp. Z o. O. Miaraka amin'ny foibe any Gdynia (81-350) ao amin'ny Plac Kaszubski 8/311, niditra tao amin'ny kaonty ny mpandraharaha ambanin'ny laharana KRS 0000471089, izay rakitra fisoratana anarana no tazonin'ny Fitsarana Distrika Gdańsk-Północ | VII Departemanta Ara-barotra ao amin'ny Rejistra Fitsarana Nasionaly, NIP 586-228-41-33 miaraka amin'ny renivohitra mizaka vola: karama PLN 50.
- Ny fanodinana data dia ahafahantsika mampitombo ny fiarovana ny serivisy omena amin'ny alàlan'ny tranokala https://mobilesignature.eu/
Izahay dia manamboatra ny angon-drakitra manomboka izao amin'ny fanomezana ny fanekena mifanaraka amin'izany mandra-panafoanana na fangatahana hanajanonana ny fanodinana data / fangatahana ny famafana ny fanodinana manokana ho an'ny tompona. Izahay no manamboatra ny angon-drakitra nangonina ho ampahany amin'ny fikafianana manomboka amin'ny fotoana hanombohanao mampiasa ny tranokala https://mobilesignature.eu/, i.e. rehefa miditra ao amin'ny tranokalanay ianao mandra-pahatongan'ny zavatra atolotra anao amin'ny fanaovana profil.
Ny tranokala https://mobilesignature.eu/ dia mamindra ny angon-drakitra amin'ireo entina manodinana amin'ny anarany fotsiny (ohatra: orinasan-tserasera sy orinasa manana alalana hahazoana azy ireo araka ny lalàna azo ampiharina, ohatra ny fitsarana. Tsy hafindra ivelan'ny faritra ara-toekarena eropeana ny data-nao ary tsy ho azo omena. fikambanana iraisam-pirenena.
Ny marika endrika RODO dia hampiana ho azy isaky ny endrika mavitrika (ohatra. Contact, commentaire),
- Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny endrika, manaiky ny fitahirizana sy ny fanodinana ny angon-drakinao amin'ny tranokala ianao.
-Ry informatique no mampahalala
- Manan-jo hiditra ny angon-drakinao ary zonao ny manitsy, mamafa, mametra ny fanodinana, ny zo hamindra data, ny zo hanohitra, ny zo hanala ny fanekena na oviana na oviana tsy misy fiantraikany amin'ny faharetan'ny fanodinana mifototra amin'ny fanekena alohan'ny fanesorana azy. . Ny fanekena dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny adiresy biuro@ibs-24.eu avy amin'ny adiresy ifandraisan'ny fanekena.
- anao ihany koa ny manan-kery hametraka fitarainana miaraka amin'ny GIODO raha hitanao fa ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana dia manitsakitsaka ny fandaharana ny fitsipika ankapobeny amin'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana ny 27 aprily 2016.
- https://mobilesignature.eu/ dia manamboatra ny data-nao amin'ny alàlan'ny lalàna mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany
- Ny fototry ny ara-dalàna ho an'ny fandrefesana statistika sy ny marketing ara-bola manokana dia antsoina hoe Ny tombotsoan'ny mpitantana eo ambany Art. 6 sec. 1 lit. F GDPR,
Tena ilaina tokoa ny mofomamy ilaina mba hampandehanana tsara ny tranokala. Ny mofomamy ihany no miantoka ny fiasa sy ny fiarovana ny tranokala no tafiditra amin'ity sokajy ity. Ireo cookies ireo dia tsy mitahiry fampahalalana manokana.
Izay mofomamy tsy ilaina indrindra ho an'ny tranokala hiasa sy ampiasaina manokana mba hanangonana ny angon-drakin'ny mpampiasa manokana amin'ny alàlan'ny analytics, dokam-barotra, ny votoaty an-tsitrapo hafa dia antsoina hoe cookies tsy ilaina. Ilaina ny hahazoana ny faneken'ny mpampiasa alohan'ny hampandehanana an'io cookies io amin'ny tranokalanao.
Tehirizo ary ekeo